Mpanohana - BullyingCanada
mila ny fanohananao Tohano ny Asaintsika Mamonjy Aina ny Fahalalahan-tananao Mandraisa anjara Afaka manampy ianao BullyingCanada miantehitra amin'ny malala-tanana
BullyingCanada misaotra ireo fikambanana malala-tanana miavaka ireo amin'ny fanohanana feno fahitana sy fangorahana.
Misaotra ireto mpanome malala-tanana manaraka ireto tamin'ny fanohanan'izy ireo BullyingCanada.
Ny fanohanana ara-bola sy ara-nofo atolotry ireo fikambanana ireo dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny famelana anay hamaly ireo antso an'hetsiny ho fanampiana azonay isan-taona avy amin'ireo tanora ampijaliana sy ireo olon-dehibe miahy azy ireo.
Raha te hianatra hanohana ianao BullyingCanada—na manokana na fikambanana—manasa anao izahay hifandray aminay na hijery ny pejy fandraisanay anjara.
Ireo mpanohana anay
Fanomezana amin'ny karazana
Ireo orinasa ireo dia manome fanohanana lehibe amin'ny fanomezana vokatra sy serivisy ho an'ny BullyingCanada.
Webhosting dia omen'ny Kualo.
Misy tranonkala mifandray sy avy amin'ity tranokala ity izay miasa na noforonin'ny na ho an'ny fikambanana, orinasa na olon-tsotra tsy mifandray BullyingCanada. Ireo fikambanana, orinasa, na olon-tsotra ireo dia tompon'andraikitra irery amin'ny fampandehanana sy ny vaovao (anisan'izany ny zo haneho izany vaovao izany) hita ao amin'ny tranokalany. Ny fampifandraisana na avy amin'ity tranokala ity dia tsy midika ho an'ny BullyingCanada izay fankatoavana na antoka amin'ny fikambanana na fampahalalana rehetra (anisan'izany ny zo haneho izany vaovao izany) hita ao amin'ny tranokalany.
BullyingCanada dia tsy mihevitra ary tsy tompon'andraikitra amin'ny andraikitra na inona na inona amin'ny fampifandraisana ny iray amin'ireo tranonkala mifandray ireo, ny fampiasana tranokala mifandray amin'ny fandefasana na fizarana votoaty, ny asa na ny atiny (anisan'izany ny zo hanehoana izany vaovao izany) ny iray amin'ireo tranonkala mifandray, na ho an'ny fampahalalana, fandikana, fanehoan-kevitra na hevitra aseho amin'ny tranokala mifandray. Izay fanehoan-kevitra na fanontaniana momba ireo tranonkala mifandray dia tokony halefa any amin'ny fikambanana manokana izay iasan'ny tranonkala manokana.
Raha vao miala ianao BullyingCanadany tranonkala, BullyingCanadaTsy mihatra intsony ny politikan'ny fiainana manokana.
Fomba hafa hanohanana BullyingCanada
Ankoatra ny fanomezana an-tserasera, misy fomba vitsivitsy hanohanana ny asa famonjena aina.
Misaotra ny mpanohana anay malala-tanana!
Ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa dia afaka mahazo tombony amin'ny roa tonta BullyingCanada ary ny raharahanao!
Ny fanomezana lehibe dia manome hery BullyingCanada hanao bebe kokoa!
Ny fiara tsy ilaina dia mivadika ho fanohanana malala-tanana!
Mamela lova tsy hay hadinoina ary tohano ny tanora ho an'ny taranaka ho avy!